App-ka NHS COVID-19: Xeerarka Isticmaalka
Fiirinta iyo isticmaalida adeegaan, waxaad ogolaatay Xeerarka Adeegsiga.
Ku soo dhawow app-ka NHS COVID-19 (‘app-ka’) iyo websaydka taageerayo (https://covid19.nhs.uk/) (si wadajir ah, ‘adeega’), barnaamijka iyo websaydka mobeelka casriga ah. Hay'ada Amniga Caafimaadka UK (‘UKHSA’, ‘inaga’, ‘waxeena’) ayaa ah soo saaraha sharciga. App-ka ayaa taageero Baaritaanka NHS, Raadraaca iyo adeega Illaalada (Test, Trace and Protection) ee Wales iyo Baaritaanka NHS iyo adeega Raadraaca (Test and Trace) ee England, oo waxaan ku siineynaa tallada ku haboon.
Waxaan hadeer la shaqeyneynaa jaalka Adeegyada Caafimaadka ee ku bixiyaa appab-ka raadraaca u dhawaanshaha dhijitaalka ee Gibraltar, Jersey, Northern Ireland iyo Scotland. Waxaan adeegsaneynaa shaqeynta Apple iyo Google si loo taageero raadraaca u dhawaanshaha dhijitaalka si loo hubiyo adeegsadayaasha app-ka in si ku haboon loogu digo.
Xeerarkaan waxay quseysaa tusmooyinka oo dhan ee adeega, oo tusmooyinka web walba uu adeega soo saaray, dhaxgalo walba oo aad ku qabi kartid adeega, iyo jawaab celin walba ama gurdbinada dib loogu celiyo adeega. Ka dajisashada, fiirinta iyo / ama isticmaashid adeega, waxaa laguu arkayaa inaad ogolaatay Xeerarkaan Adeegsiga.
App-ka waxaa loo naqshadeeyay inay ka caawiso dadka England iyo Wales (oo ay ku jiraan booqdayaasha) inay joojiyaan faafida fayraska korona (COVID-19). Waxay ku caawisaa dadka inay aqoonsadaan oo ogeysiiyaan kuwa ku jiray ama ku jiri karo halista sababtoo ah meesha ay ku noolyihiin, oo ay u dhawaadeen ama goobaha ay booqdeen.
Ogeysiino walba ee lagu bixiyay app-ka ayaa ah talin kaliya. Haddii aad qabtid walaacyo ku saabsan tallada app-ka oo ay ku jiraan haddii la is gooniyeynayo ama la raadinayo baaritaan, waxaa laguugula talinayaa inaad la xiriirtid NHS 111, NHS 119 ama xirfadlaha daryeelka caafimaadka ku haboon oo ay u suurtogaleyso inay ku siiyaan warbixinta ku haboon.
Hagida kale ee ku saabsan fayraska korona waxaa laga heli karaa NHS ee England iyo Wales.
Adeegsadayaasha waxay taageerayaan jawaabta caafimaadka dadweynaha ee cudurka safmarka, sidoo kale sida hubinta app-ka inuu u shaqeynayo sida laga filanayo, iyada oo la wadaagayo warbixin (oo gundhiga magac la'aanta ah) iyo labadaba barnaamijyada raadraaca u dhawaanshaha quseeya England iyo Wales.
Iyada oo la adeegsanayo app-ka iyo wadaagida warbixintaan, waxaad sameyneysaa ku deeqid muhiim ah ee lagu caawinayo bulshadaada inay caafimaad yihiin oo nolol badbaadiso.
App-ka waa UKCA (Waafaqsanaanta UK oo la Qiimeeyay) u calaameysan sida Heerka I ee aalada caafimaadka ee Boqortooyada Ingiriiska oo lagu hormariyay u hogaansanaanta Qaanuunada Aaladaha Caafimaadka 2002 (SI 2002 No 618, sida lagu badelay).
Adeega ayaa loogu tallogalay kaliya ujeedooyinka sida lagu tilmaamay Ogeysiinta Arimaha gaarka ah (https://www.gov.uk/government/publications/nhs-test-and-trace-app-privacy-information).
Adeegsigaaga app-kaan waxaa lagu maamulaa sharciyada England iyo Wales.
La shaqeynta jaalka Adeegyada Caafimaadka
Haddii lagaa helo baaritaanka fayraska korona oo aad ogolaansho siisid si aad ugu digtid adeegsadayaasha kale ee app-ka, waxaan la shaqeyneynaa jaalka adeegyada caafimaadka si loo hubiyo in dhammaan adeegsadayaasha app-ka quseeyo helaan digniin.
Iyada oo la adeegsanayo shaqeynta Apple iyo Google, waan hubinaa in aqoonsigaaga uu ka qarsoonyahay adeegsadayaasha kale ee app-ka, Adeegyada Caafimaadka jaalka, iyo dowlada.
Gibraltar, Jersey, Northern Ireland iyo Scotland
App-ka wuxuu leeyahay shaqooyinka xiggo:
digniinta gaarista, taas oo ku ogeysiineyso haddii aad u dhaweyd isticmaalaha kale app-ka oo laga helo COVID-19
dooqa u wadaagayo warbixin (si qarsoodi ah) ee ku saabsan baaritaan walboo COVID-19 laga helo ee laga yaabo inaad heshid, oo u ogolaanayo adeegsadayaasha kal ee app-ka inay ogaadaan oo laga yaabo inay u dhawaayeen adeegsadaha kale ee app-ka ee laga helay baaritaanka COVID-19
warbixinta waqtiga dhabta ah ee ku saabsan halista COVID-19 ee aaga deegaankaaga
oo ay ku jiraan boor dhajinta adeegyada iyo warbixinta aagaaga. Adeegyadaan iyo warbixinta waxay ka baxsanyihiin banaanka baaxada Xeerarka Adeegsuga ee app-ka NHS COVID-19 oo waxay quseysaa xeerarkooda iyo sharuudahooda gaarka ah.
aalada lagu ‘imaanayo’ goobaha muujiyaa boostiga koodhka rasmiga ah ee NHS QR, taas oo kuu ogolaaneyso inaad haysid diiwaanka goobaha aad booqatid oo aad heshid digniinada ku saabsan dilaacyo walboo xiggo
hubiyaha aastaanta si aad u aragtid haddii laga yaabo inaad qabtid COVID-19 taas oo dib loo eego oo lagu cusbooneysiiyo sida waafaqsan tallada caafimaadka dadweynaha ugu dambeyso
linkiga websaydka quseeyo, oo laga dalbanayo baaritaanka COVID-19
xisaabinta ku ogeysiinayo inta aad ka tagtay haddii aad u baahatid isgooniyeynta
awooda lagu gelinayo heerkaaga tallaalka iyo (haddii aad ka yartahay 18) jir si aad u cusbooneysiid tallada is gooniyeynta aad heshid;
awooda lagu sheegayo inaad Caafimaad ahaan laga dhaafay (marka laga reebo Wales) ama qeyb ka mid ah tijaabada caafimaadka
kicinta lagu sahminayo haddii isticmaalaha u qalmo taageerada dhaqaalaha (midkood Lacag bixinta Taageerada Baaritaanka iyo Raadraaca England ama Qorshaha Taageerada Is Gooniyeynta (SISS) ee Wales)
warbixinta magac la'aanta laga dhigay ee lagu wadaagayo ku caawinta maareynta iyo ka jawaabida xaalada degdega ee caafimaadka dadweynaha
awooda lagu sameynayo xasuusiyayaasha shaqooyinka qaar ah iyo siinta xasuusiyaal dheeraad ah, ee app-ka, oo shaqooyinka ugu muhiimsan sida raadraaca u dhawaanshaha.
Fadlan Ogow: Ma qaadno wax tallaabo ah oo lagu xaqiijinayo warbixinta da'da ama heerka tallaalka ee aad gelisay app-ka. Adiga ayaa masuul ka ah saxnaanta warbixinta aad bixisay, iyo tallada uu bixiyay app-ka waxaa lagu cusbooneysiinayaa sida waafaqsan ku dhawaaqidaada.
App-ka waa inuusan saameynin howlgalka caadiga ah ee taleefonkaaga.
App-ka wuxuu siiyaa linkiyo websaydyada dibada ah, ee lagu go'aansado degmada koodhka boostada aad gelisay. Linkiyada oo labada koodhka boostada Welsh iyo Ingiriiskaayaa lagu bixiyaa barnaamijyada raadraaca u dhawaanshaha quseeyo.
Fadlan adeegso shaqeynta hakinta, taas oo hakiso raadraaca u dhawaanshaha, goortii:
aad si buuxdo ayaad uga illaalsantahay macaamiisha iyo asxaabta oo xadeynta jireed, sida shaashada Perspex
aad dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka ay tahay inay hakiyaan app-ka iyada oo ay ka shaqeynayaan dhismooyinka daryeelka caafimaadka, oo ay ku jiraan isbitaalada iyo qaliinada Dhaqtarka Guud (GP)
aad tahay shaqaale daryeelka caafimaadka iyo bulshada oo aad xirantahay heerka caafimaadka Qalabka Illaada Gaarka ah (PPE) sida maaskaraha qaliinka
taleefonkaaga lagu meeleeyo sanduuqa alaabaha ama meel u dhiganta
Xasuuso inaad ku soo laabato (hakin la'aanta) raadraaca u dhawaanshaha markii kuwaan aysan markale quseynin. App-ka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameysid waqtiyeeye iyo xasuusiye. App-ka wuxuu bixinayaa xasuusiye dheeraad ah oo maalinta xigta.
App-kaan ayaa sababi karo faragelinta ee aaladaha caafimaadka Bluetooth-daaran.
La hadal xirfadlaha daryeelka caafimaadka ama tallo ka raadi soo saaraha aaladaada wixii warbixin dheeraad ah haddii aad ka walaacsantahay wax ku saabsan halista faragelinta ee aaladaha caafimaadka Bluetooth-daaran.
Faahfaahinada nooca hadeer ee app-ka waxaa laga heli karaa qeybta “Wax ku saabsan app-kaan” ee gudaha app-ka.
Fadlan tixraac Ogeysiinta Arimaha gaarka (https://www.gov.uk/government/publications/nhs-test-and-trace-app-privacy-information) wixii warbixin dheeraad ee ku saabsan sida xogta gaarka ah ee nidaamyada app-ka oo ixtiraamo xaquuqahaaga arimaha gaarka ah iyo qarsoodiga sida waafaqsan sharciyada illaalada xogta.
Waan ka afeefanay oo aan ka reebnay dhammaan masuuliyada ee xadka ugu badan ee laga ogolyahay sharci ahaan ee sheegtaha, qasaaraha, dalabka ama waxyeelooyinka nooc walba wax walba (oo ay ku jiraan dayacaadeena) oo ka soo baxayo ama la xiriiro adeegsiga midkood adeega ama warbixinta, tusmada ama qoraalada ay ku jiraan adeega ama websayd walboo kale ee adeega ku xiro. Warbixinta ay hayaan adeega waa sida ay sheegeen adeegsadaha, oo ma qaadeyno wax masuuliyad ah saxnaantooda ah.
Ma sameyneyno damaanad ama wakiilka, muuji ama soo jeedi, sida joogteynta adeega iyo xadka ugu buuxo ee ogolyahay sharciga damaanado walboo la soo jeediyay ee la xiriirto adeegyada ayaa halkaan laga reebay. Waxaan leenahay xaquuqda lagu laalayo, lagu joojinayo ama haddii kale la badelo helida qaar ama dhammaan adeegyada xili walba iyo ogeysiin la'aan.
Dib u eegida Xeerarkaan Adeegsiga
Waxaan dib u eegi karnaa Xeerarkaan Adeegsiga waqti walba iyo isticmaalkaaga joogtada ah ee adeega waxaa loo arkayo ogolaanshaha ee Xeerarka Adeegsiga noocaas ah ee dib loo eegay.
Dib u eegid walboo noocaas ah ayaa saameeyo markii boggaan la daabaco.
Haddii aad ogaatid nuglaanshaha amniga imaan karo ama ka shakisid dhacdada amniga ee la xiriirto adeegaan, fadlan raac barnaamijka shaacinta nuglaanshaha ee app-ka NHS COVID-19 iyo kaabayaalka. Waad ka aqrin kartaa Xeerka Shaacinta Nuglaanshaha ee HackerOne (https://hackerone.com/nhscovid19app).
Waxaad ku soo wargelin nuglaanshaha ku jiro app-ka, kaabayaalka dambe ama websaydka dhinaca (https://hackerone.com/03351cb3-53e3-4bb8-8fcc-a226e3b528fc/embedded_submissions/new).
Adeega wuxuu ahaa oo sii ahaan doonaa inuu quseeyo hubinada amniga.
Waxaa la daabacay 29/11/2021
Hore : Su'aalaha caadiga ah